सशस्त्रका लेखाअधिकृतलाई बिल काट्नै चटारो, विनाटेण्डर सामान खरिद « Naya Page
सशस्त्रका लेखाअधिकृतलाई बिल काट्नै चटारो, विनाटेण्डर सामान खरिद
प्रकाशित मिति : 10 July, 2018 8:07 pm
काठमाडौं, २६ असार । आर्थिक बर्षको समाप्ती हुनै लाग्दा सशस्त्र प्रहरी बलका लेखा अधिकृत गणेशबहादुर मल्ललाई बिल काटेर भ्याईनभ्याई छ । उनले कानुनका छिद्र छलेर आर्थिक बर्षको अन्तिममा टुक्रे खरिद गरेको देखाएर भुक्तानी दिएका छन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान छल्न टुक्राटुक्रामा खरिद गरेको देखाएर धमाधम बिल काट्दै भुक्तानी दिइरहेका छन् । ५ लाख रुपैयाँसम्म विनाटेण्डर खरिद गर्न पाइने ऐनको ब्यवस्था सशस्त्रमा दुरुपयोग गरी टुक्रा पार्दै बिल काटेर भ्रष्टाचार भएको छ ।
ठेकेदार राजमान मिश्र र लेखाअधिकृत गणेशबहादुर मल्ल
लेखाअधिकृत मल्लले राजमान मिश्रबाट तुम्लेट खरिद गरेको भनी ५ लाखका दरले ४ वटा बिल काटी २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् । राजु थापालाई चुस्ताको लार्जेष्ट भेष्ट खरिदको त्यसैगरी ४ वटा बिल काटी ५ लाखका दरले दिएका छन् । अर्का ठेकेदार श्रवण अग्रवाललाई सेतो लट्ठीको ५ लाखका दरले भुक्तानी दिएका छन् । यसरी ऐन छल्नका लागि टुक्रा टुक्रा बिल काटेर तीन ठेकेदारलाई २० लाखका दरले आइतबारदेखि मंगलबारसम्म भुक्तानी दिइसकेका छन् । नेपाल प्रहरीमा यस्ता टुक्रे काम प्रबन्ध शाखाको खुद्रा उपशाखाले गर्दछ । तर सशस्त्रमा सोझै लेखा शाखाबाट दिइएको छ । मिश्रबाट खरिद गरिएको तुम्लेट ३ बर्षअघिक गुणस्तर फेल भएको भनेर सशस्त्रले अस्वीकृत गरेको थियो । मिश्रले तिनै तुम्लेट अहिले दिएर भुक्तानी लिएका छन् । लेखाअधिकृतले मंगलबार पनि ब्याकडेट राख्दै बिल काटिरहेका छन् । कानुनी रुपमा २५ गतेसम्म बिल काट्न पाइन्छ ।
विगतमा ऐन छल्दै करोडौं करोडका टुक्रे खरिद गर्ने सशस्त्रका चार पूर्वआइजीपी बासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र कोषराज वन्त विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दाको अझै फैसला भएको छैन । पूर्व लेखाअधिकृत विनबहादुर थापा पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
सिद्धार्थ बैंकको शाखा नयाँ बजारमा
काठमाडौं,फागुन ६ । सिद्घार्थ बैंकले काठमाडौंको नयाँ बजारमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले
शिवम् सिमेन्ट आईपीओः पहिलो दिन ७ लाख ४३ हजार ६ सय कित्ताका लागि आवेदन
काठमाडौं,फागुन ६ । शिवम् सिमेन्टले प्रभावितसहित सर्वसाधारणको लागि खुला गरेको शेयरमा पहिलो दिन ७ लाख
सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको सेवा अब यूकेबाट पनि
काठमाडौं,फागुन ६ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको सेवा अब बेलायतबाट पनि सुरु भएको छ ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली !
काठमाडौं, ६ फागुन । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम अन्सारीको नागरिकता
१२ हजार शाखा अधिकृतको समायोजन, को कहाँ पुगे ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं, ६ फागुन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करीब १२ हजार शाखा अधिकृतको
१५ सय घुस लिंदा जागिर जाने, ७८ लाख लिने अख्तियारका आयुक्तमाथि केही नहुने ?
काठमाडौं, ६ फागुन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त राजनारायण पाठकले